Asa maneran-tany: manokatra varavarana ny Fanahy Masina
"Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany." —Mat. 24:14.
Saha midadasika ho an'ny asa misionera ity izao tontolo izao ity, ary isika izay efa niorina tamin'ny fahamarinana efa ela dia ela dia tokony hahery amin'ny fiheverana hoe ireo saha sarotra tratrarina fahiny dia azo idirana tsara ankehitriny. Tokony hikatsaka ny fifohazan'ny fanahy tia asa misionera ny fiangonana rehetra eo amin'ny tanintsika. Tokony hikatsaka fitomboana tsy miato eo amin'ny zotom-po sy asa izy ireo. Tokony hivavaka ny rehetra mba ho foana ny fitsilamodamohana izay nanakana ireo olona sy fitaovana hanaovana ny asa, ary hitoetra ao amin'ny fanahy i Kristy. Noho ny amintsika dia lasa ory sy nahantra Izy, ary noho ny fahantrany dia lasa manan-karena isika.
Ny asa ataon'ny Fanahy Masina dia hampiaiky ny fahotana, ary fantatro fa fahotan'ny tsirairay avy amintsika ny fitsilamodamohana misy ankehitriny. Rehefa mijery manodidina ireo saha maro izay nidirana isika, dia alaim-panahy hanontany hoe: "inona no namboarin 'Andriamanitra?" Inona no tokony ho nataony nefa tsy nataony? Nanomana zavatra hizarany ny fahasoavany sarobidy Andriamanitra, hanome ny heriny hahatanterahana ny asany. Tsy misy tsy ampy ny avy amin'Andriamanitra; fa avy amin'ny olona ny tsy fahampiana, izay manda tsy hiara-miasa amin'Andriamanitra.
Amin'ny alalan'ny drafitra novolavolainy, dia azo harenina amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny olona ny zavatra tsy azo natao ho famonjena ny olona. Ny mpanota izay notahina tamin'ny alalan'ny fahazavana sy fahamarinana, ary mahafantatra fa amin'ny alalan'ny fahasoavana homena azy dia afaka ny hahafeno ny fepetra hahazoana ny famonjena nampanantenaina izy, kanefa manda tsy hanao ezaka, dia ny tenany ihany no tompon'antoka ny amin'ny fahaverezany. Azo lazaina araka izany fa zava-poana ho azy ireo ny nahafantesan'i Kristy.
Fa iza moa no homelohina amin'ny fahaverezan'ny fanahy tsy mahalala an'Andriamanitra, ary tsy nanana tombontsoa handre ny anton'ny finoantsika? Adidy inona no mitambaby eo an-tsoroky ny fiangonana manoloana izao tontolo izao very tsy misy filazantsara? Raha tsy misy fandavan-tena marina kokoa eo amin'ireo izay milaza ny tenany fa mino ny fahamarinana, raha tsy misy fahatokiana marina kokoa amin'ny fitondrana ampahafolony sy fanatitra ho ao amin'ny trano firaketana, raha tsy tanterahina ny drafitra midadasika kokoa noho izay efa vita teo aloha, dia tsy hahatanteraka ny iraka fitoriana ny filazantsara amin'izao tontolo izao sy hitory an'i Kristy amin'ny manan'aina rehetra isika. - HoM, 1 Aprily 1895.